Tiruun Bubbulte Lafee Taati – Adda Bilisummaa Oromoo
(Ibsa ABO – Sadaasa 14 2019)
Sadaasa 09 bara 2019 irraa eegalee haleellaan Sabummaa irratti kan hundaawe fakkaatu barattoota Oromoo Universitiilee Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraatti argaman keessa jiran irratti gaggeeffamaa jiru ammas hin dhaabbanne. Sadaasa 09, 2019 University Waldiyaatti lubbuun barattoota Oromoo 2 galaafatamee hedduun kan itti madaawan haleellaan jibbiinsa Sabummaa irratti kan hundaawe fakkaatu kun yeroo ammaa gara Universitiilee Gondar, Dasee fi Dabrabrihaanittis babal’atee miidhaa bifa gara garaa hedduu barattoota Oromoo irraan gahuu
itti fufee jira. Odeeffannoo hanga ammaatti qabnuun guyyaa kaleessaa (Sadaasa 13, 2019) University Gondaritti barattootni Oromoo 2 akka hamaatti kan madaawan oggaa tahu University Daseettis akkasuma barattootni muraasni madaa ulfaataa hanga lubbuutti sodaachisu
madaawuun beekamee jira.
Dhimmi miidhaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Amaaraa keessatti barattoota Oromoo irra gahaa jiruu kun Oromoo qofa osoo hin taane Ummatoota biyya kanaa hundumaa yaaddoo guddaa keessa kan galchaa jiru dha. Gochaan fokkataan kun hatattamaan kan hin dhaabsifamne
yoo tahe achi irraa babal’atee biyya kana balaa fi gaaga’ama guddaaf afeeruu danda’a. Gama kaaniin Mootummaa Naannoo Oromiyaas tahe Mootummaan Federaalaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo gahaa kennanii miidhaa kana battalatti dhaabsisuuf tarkaanfiin quubsaan hanga
ammaatti fudhatan mul’achuu dhabuun isaa hedduu nu gaddisiisa.
Mootummaan Naannoo Amaaraa miidhaa qaanfachiisaa bulchiinsa isaa jalatti barattoota Oromoo irra gahaa jiru kana hatattamaan dhaabsisuu hanqachuu qofa osoo hin taane sadarkaa miseensota hooggana isaa ol’aanootti haala itti gaafatamummaan itti hin dhagahamneen
miidiyaa marsaalee hawaawummaa (Social media) irratti bahanii wanti barreessaa turan gocha kana keessaa akka harka qabanitti kan shakkii namatti bulchu ture.
Maatiin barattootaa ilmaan isaanii manneen barnoota ol’aanoo (Universitiilee) naannoo adda addaatti oggaa ergan wabii nageenya ijoollee isaanii Mootummaa irratti dhiifachuudhaani. Mootummaan Federaalaas tahe kan Naannoolee hundaa kana hubatanii nageenya barattootaa
eeguuf dirqama akka mootummaatti qaban akka bahatan jabeessinee gaafanna. Kun tahuu baannaan dhibdeen kun babal’atee fi bifa jijjiirratee Ummatoota walitti buusuudhaan balaa nageenya biyyaa akka hin taane nu yaaddessa.
Maayyii irratti lubbuu barattootaa haala kana keessatti bifa nama gaddisiisuun dabre hundaaf gadda nutti dhagahame irra deebinee ibsachaa, miidhaa ilmaan keenya irra gahaa jiru kana dhaabsisuufis tahe balaa sana irra ulfaataa kanaan wal qabatee dhufuu malu oolchuuf kanneen
dhimmi ilaalu hundi gaafatama isaanii akka bahatan cimsinee gaafanna.
Sadaasa 14, 2019